XOG:- Shariif Xasan oo durba bilaabay dagaal siyaasadeedka uu kula jiro madaxweyne Xasan Sheekh – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Shariif Xasan oo durba bilaabay dagaal siyaasadeedka uu kula jiro madaxweyne Xasan Sheekh
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dagaal siyaasadeed oo aan hore loo arag ku bilaabay madaxweynaha haatan xilkiisa dhamaaday islamarkaana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Ilo xog-ogaal ah aynu heleyno ayaa sheegaya in dagaalkaan uu bilawday kadib markii uu burburay isbaheysigii doorashada ee Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo C/kariin Xuseen Guuleed, kaas oo ku socdaa dhowr jiho oo kala duwan.
Sidoo kale, waxaa ololahaasi uu wado Shariif Xasan Sheekh Aadan qeyb ka ah wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo loo xil saaray inuu saxaafadda ka weeraro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana wasiirkaasi uu maalintii shalay howl weyn ka bilaabay magaalada Muqdisho, isagoo warbaahinta caasimadda u qeybiyay wareysiyo uu Xasan Sheekh ku weerarayo.
Wasiirka ganacsiga maamulka Koonfur Galbeed C/laahi Sheekh Ismaaciil oo kasoo jeeda beesha Abgaal ayuu Shariif Xasan u xil saaray inuu hogaamiyo dagaalka warbaahinta ee lagu qaadayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa, taasoo uu si dardar leh ku bilaabay.
Dhinaca kale, ololaha kale ee Shariif Xasan ayaa noqday in dagaalkii uu kula jiray beesha siyaasiyiinta beesha Daarood uu u wareejiyo beesha Abgaal.
Shariif Xasan ayaa raadinaya isbaheeysi cusub oo looga hortago mas’uul kasoo jeeda beesha Daarood inuu madaxweyne noqdo, isagoo bilaabay wada-hadal uu ku doonayo inuu isbaheeysi kula sameeysto musharixiinta beesha Daarood ee xilka madaxweynaha u sharaxan.